Kulanka KDQ & Saxaafada | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 July 7 News Kulanka KDQ & Saxaafada
Kulanka KDQ & Saxaafada
Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa caawa oo sabti soo galayso 07/07/17 kulan kula yeeshay xubno ka socda Saxaafada Somaliland xarunta KDQ.
Kulankan oo ujeedadiisu ahayd dardargalinta wada shaqaynta KDQ iyo Saxaafada Madaxa banaan. Ugu horeyn waxa halkaas ka haddashay Komishaneer Kaltuun Sh. Xasan oo soo Dhaweysay Saxaafada ugana warantay xaalada kaadh bixinta iyo masuuliyada ka saaran KDQ iyo saxaafadaba in ay si wadda jir ah u ilaaliyaan hawlaha qaranka, siiba tan hadda socota ee ah kaadh qaybinta iyo doorashada soo socotaba.
Intaas ka dib waxa hadalka la wareegay xubno ka socda saxaafad uguna mahad celiyay KDQ kulankan iyo sida ay tahay wadashaqayta KDQ iyo Saxaafadu, iyaga oo ka codsaday KDQ in la xoojiyo xidhiidhka KDQ iyo saxaafada oo ay yar saluugayaan, sidoo kalana hoos loo eego dhanka heshiisyada iyo dhaqaalahaba.
G/Kuxigeynka KDQ Mudane Maxamuud Waceys ayaa asna uga mahad celiyay saxaafada ka soo qayb galka kulankan, waxaanu ku dhiiri galiyay xubnihii saxaafada in ay danta qaranka ilaaliyaan wadashaqaytana ay xoojiyan. Gabagabadii Gudoomiyaha KDQ oo soo afmeeray kulanka ayaa ugu balan qaaday in ay hoos u eegi doonaan cabashada ay soo gudbiyeen sidoo kalana ay xoojin doonaan xidhiidhka saxaafada iyo KDQ. Gudoomiyaha ayaa hadalkiisii ku soo gunaanaday in laga wada shaqeeyo danta qaranka, sidoo kalana laga wadashaqeeyo sidii dadkii is diiwaan galiyay ay u qaadan lahaayeen kaadhkooda codbixineed.